Lapho uthenga imoto, njalo umshayeli unesithakazelo yini injini enokwethenjelwa kakhulu. Kuleli isici kuncike ukuphepha UKUQINA imoto. Kufanele kuqashelwe ukuthi motor ngamunye has izici zayo siqu mayelana nokwethenjelwa ukumelana namathonya ezihlukahlukene. Ake sibheke ukuthi izinjini kungaba sengathi ukuba ngempela okungcono.
Top phakathi izinjini udizili
Ukuqala ukuchaza ukuthi yini injini enokwethenjelwa kakhulu phakathi izinguqulo udizili. Engingakusho nje ukuthi kule minyaka yamuva baye sekwande izimoto ithandwa kangakanani ngamayunithi ezinjalo. Ziyakwazi uhlamvu ezahlukene futhi sporty, futhi ijubane nokuzinza. Uma uvakasha eziningi futhi ngokuvamile, diesel ngalezi zinhloso zimane Irreplaceable. Uma isizukulwane esidala motor, it has a design elula ngemajini ezinhle ukuphepha.
Enokwethenjelwa kakhulu udizili i-Mercedes-Benz - OM602 omkhaya. izinjini ezifana ethulwa 5 cylinder izinguqulo. Sinenkosi valve ezimbili isilinda ngayinye, mechanical fuel futha. Abashayeli bathi motor kuholela izici ezilandelayo: mileage izimoto kanye ukumelana amathonya kwemvelo. Uma kungenjalo amandla enkulu (90-130 amalitha. Nge.) Units bebelokhu kubhekwa enokwethenjelwa kakhulu futhi engabizi. Lezi motors zafakwa phezu Mercedes izimoto ngemuva W124, W201 (MB190), Suv G-class, ezimotweni T1 kanye umsubathi. Uma isikhathi ukuqapha imishini fuel nezinamathiselo, lezi diesels labo abazokwazi "esondweni" lenqwaba amakhilomitha.
Mhlawumbe izinjini onokwethenjelwa kunayo yonke izimoto ezithwala namuhla ncamashi eBavaria. Ngaphezu ukuqina, basuke libhekene umoya yezemidlalo ukuthi ngokuyisisekelo eshintsha isithombe injini diesel. onjiniyela BMW sika bakwazi abonise iphasi ukuthi iyunithi enjalo kungaba okusheshayo, futhi zingabekwa yiluphi uhlobo umshini. Ngo izimoto BMW , kukhona ezihlukahlukene powertrains, izinjini udizili zithandwa hhayi ngakho kudala.
Kuyini injini "BMW" enokwethenjelwa kakhulu phakathi udizili? Ochwepheshe ukugxila 4 cylinder Turbo injini BMW N47D Twin Turbo, okuyinto has a ivolumu 2.0 amalitha. Yena kwathiwa owawina esigabeni "Kuhle ezintsha." Qaphela ukuthi lokhu motor ubekwe lenqwaba onobuhle. Futhi ngokuvamile, abathengi uthanda likaphethiloli izinjini, kunokuba udizili, okuyinto kungaba iqhwa ebusika.
Enokwethenjelwa kakhulu injini "BMW" ngo-2016 - i-BMW B58, okuyinto ibekwe phezu izimoto onobuhle 340i F30. Lokhu 6 cylinder amandla iyunithi, okuyinto kancane kancane anemisila elisha sha BMW zezimoto. Qaphela ukuthi BMW is ehlelekile ethula ku izimoto zabo nophethiloli, futhi diesel bangumndeni Modular. engavamile wabo - izingxenye zifane futhi olulodwa nengxenye-litre zokusebenza umthamo owodwa isilinda. Kulokhu a 2015 BMW hatchbacks goda ifakwe motors 118i turbotroykoy 1.5 litre at 136 litres. a. A egumbini Convertible kanye uchungechunge lwesibili - diesel ka 2.0 amalitha.
I izinjini onokwethenjelwa kunayo yonke izimoto BMW, ochwepheshe bathi - akusiwona uphethiloli, diesel amayunithi TwinPower Turbo ne amasilinda ezintathu noma ezine. Motors B47 futhi B37 kulekelelwa Turbo umjovo uhlelo futhi lapho ungakwazi ukushintsha i-geometry. Esikhathini esifanayo 2015 imodeli BMW kulekelelwa elikhiqizayo entsha isizukulwane quadruple nomthamo 23 amalitha. a. Ngakho, izinjini lweBMW abe onokwethenjelwa futhi high-amandla, nakuba elula design.
Qaphela ukuthi impilo isilinganiso izinjini BMW balinganiselwa ku-150,000 km, njengoba izingxenye zabo ngaso sonke isikhathi libhekene ngemfanelo evelele. Ngaphezu kwalokho, wonke amamodeli ochungechungeni abe osayizi ifektri ukulungisa. Ngakho-ke, kungaba khona izinkinga esikhundleni kwamandla amayunithi.
Yiziphi "Audi" izinjini enokwethenjelwa kakhulu? Akukho impendulo elula. Kodwa abasebenzisi kanye nochwepheshe ukhombe 1.4L uphethiloli izinjini ephethe namandla 150 amalitha. s., 190 l. a. 252 l. a. Lesi sakamuva kokuba eyayihambisana ezine-wheel drive Quattro. Phakathi lokubolekwa izinjini udizili kufunwe ezine-TDI, okuyinto umthamo 150 amalitha. a. futhi 190 l. a. Ngaphezu kwalezi, ukubeka 6-gearbox manual.
Enye injini, okuyinto kungathiwa injini enokwethenjelwa kakhulu "Audi", - A4 Avant-g-Tron 2.0 TFSI (170 hp ..). Sici Its ehlukile - ikhono ukugijima ku onomfutho igesi yemvelo. Ngokuqondene "Audi A6" imodeli, lapho abasebenzisi ukwaba ezintathu-litre aspirated. Ukwethembeka kwako kungenxa ubuchwepheshe elidala zokukhiqiza kanye cast iron liner. Nokho, nenjini esinjalo kwenziwa kusukela ngo-2008.
Kuyinto ephawulekayo, kodwa sha Volkswagen ezibhekwa amayunithi enokwethenjelwa kakhulu okungukuthi izinjini udizili. Esikhathini isibalo izinjini enokwethenjelwa kakhulu injini "Volkswagen" - a AXD 5 cylinder nge displacement 1.8 amalitha. Ngokusho kanye nabashayeli, kanye nezifundiswa, motor muhle kakhulu amandla amakhono ngezinga elithile nesizotha petrol. Ezimweni eziningi, lolu phiko ifakwe "Volkswagen Tiguan".
Akulula kanjalo ukunquma enokwethenjelwa kakhulu injini ukucupha kuhlanganise uphethiloli. Lolu luhla kumele kuqashelwe esitebeleni ku 2-litre engine AWM okubonisa amandla 140 amalitha. a. Bakuhlonyiselwe nenkambiso ezifana "Jetta", "Tiguan". Phakathi izinzuzo abasebenzisi injini ubike kakhulu kunoma iyiphi isitayela ukushayela futhi kunoma iyiphi indawo komgwaqo.
Kwaphela isikhathi eside lalibhekwa enokwethenjelwa kakhulu V6 injini. Phakathi zako isehlane Dynamics enhle kakhulu ukunyakaza, namandla, ukusheshisa ngokushesha. Iyunithi okuthanda labo ngokuvamile go on nemvelo, lapho imigwaqo Awekho izinga ezahlukene kanye evenness. I izinjini enokwethenjelwa kakhulu kuhlanganise eziyisithupha cylinder onobuhle - Abu ephethe namandla 1.8 amalitha. Nge elula ukwakhiwa iyunithi muhle bashayeli abangafuni ukuthobela usanda ukushayela imoto. Ngaphezu kwalokho, iyahluka ibhalansi. Lapho imoto ingekho vibration ISIZINDA netindlela eziyisisekelo. Lokhu injini uyakwazi ukukhonza ngisho noma ugijima abangaphezu kwesigidi amakhilomitha.
I izinjini okunokwethenjelwa kakhulu eyake yaba khona ngo-brand Japanese. Sinikeza ekuhlaziyeni ethandwa kakhulu futhi okuhle kakhulu ngokuya izinga kanye nokwethembeka izinjini. Mhlawumbe ukuziphatha esitebeleni kunazo kungenziwa kubhekwe njengento iyunithi Toyota bo-3-FE. Njengoba izindinganiso zokuziphatha ezinokwethenjelwa, nokho umyeni futhi undemanding. It has a ivolumu 2.0 litre, 4 cylinder 6 valve. Lokhu injini sifakwe onobuhle ezifana Camry, Carina, Corona, Avensis, Altezza. Ngokusho Mechanics, izinjini salolu chungechunge kukhona ikhono ezahlukene emangalisayo ukumelana zonke izimo. Ngaphezu ukulungisa nje sakhiwa uMdali ohlakaniphile ke. afanekisa uqobo isebenze motor Toyota Series 1-AZ, umthombo okuyinto mayelana 200 000 km.
Enokwethenjelwa kakhulu ezinjinini zezimoto ungabahlukanisa phakathi uhlelo oluthi "Mitsubishi". Mitsubishi 4G63 - kule yunithi amandla, okuyinto njalo washintsha, ngcono, ngenxa kwenzekeni ifakwe uhlelo ukulungiswa isikhathi isigaba, eziyinkimbinkimbi supercharging izinhlelo. Kuyaphawuleka ukuthi injini ibekwe hhayi kuphela "Mitsubishi", kodwa futhi ku Huyndai brand izimoto, Kia, Brilliance. Million amakhilomitha eliqhutshwa motors ingafinyelela ngokwemvelo aspirated futhi turbocharged nakuba ukuhluka abe nokuphila isikhathi eside. Cha "izifo" sina futhi Mitsubishi 4B11 injini chungechunge, okuyinto has a resource of 200,000 km. Ngenxa izakhi izinga okusezingeni eliphezulu, kalula ukwakhiwa, ukuntuleka izingxenye eziyinkimbinkimbi kufinyelelwa ezingeni lelisetulu ukuthembeka iyunithi.
Honda D-uchungechunge - umndeni Japanese izinjini, lapho uchungechunge ezingaphezu kwezingu-10 onobuhle motor nomthamo 1.2-1.7 amalitha. Ngokusho kochwepheshe, lokhu mhlawumbe neubivaemye onobuhle kakhulu ongabonisa lokulwa umoya nge imithombo ezincane zokusebenza. Phakathi imikhiqizo emisha ungabahlukanisa motor Honda R20 chungechunge. It libhekene high quality izingxenye, elula valve ukulungiswa isikimu. Kodwa ummeleli onokwethenjelwa kunayo yonke mayelana motors Japanese angabhekwa Subaru EJ20 chungechunge. Usalokhu wagqoka ezinye onobuhle of izimoto, kodwa labo ezisebenza Japan kuphela. Isisetshenziswa mandla Phiko 250 000 km, eliphezulu izingxenye. Yiqiniso, ezingxenyeni zokuqala ezisele for motor akuzona ezishibhile.
Phakathi imodeli okunokwethenjelwa kungenziwa kuphawulwe kusukela injini 20ne Opel umndeni. engavamile zayo ukuthi bakhonza izimoto isikhathi eside kakhulu lapho imishini isetshenziswa. Umklamo elula yakhiwa 8 valve, drive ibhande, elula basakaza uhlelo umjovo. Lokho, ochwepheshe bathi, futhi umphumela ubude bokuphila injini. C20XE - kwenye imoto, elingelakwaJuda umndeni Opel. Yena wabekwa izimoto uhlanga futhi lifanelwe Izibuyekezo kuhle izinga, ukuzinza kanye nomklamo elula. Nokho, namuhla leli amandla iyunithi isetshenziselwa kuhlomisa izimoto njalo.
Zonke izinjini zanamuhla yizigaba ngokuvumelana amakilasi izimoto zona ifakwa. Futhi ithinta izici lobuchwepheshe kanye nokusebenza. Ngakho, isigaba imoto encane, okuyinto ngenhlanhla yisona esikhulunywa abantu abaningi ezweni lethu, kuyenzeka futhi nokungabi khona kwanoma yiliphi ezintsha ezinkulu. Ukuze izimoto kule ingxenye bavame K7M injini kusuka Renault, esibonakala by amazinga aphakeme ngokuthembeka. iresiphi yayo, endleleni, silula: motor has a ivolumu 1.6 amalitha, ama-valve 8, kodwa akanayo izingxenye eziyinkimbinkimbi netindlela. Ezindaweni lesibili nelesithathu eklasini encane, ungakwazi abeke powertrains Vaz-21116 kanye Renault K4M.
Esikhathini ingxenye ephakathi umholi kwesokudla angabhekwa K4M kusukela "Reno". Nokho, le mishini ngokwabo makhulu ngobukhulu futhi umthamo, ifakwe automatic transmission, okwandisa izimfuneko amandla motor. Phakathi eshibhe, kodwa izinjini okungokoqobo middle class kungenziwa Z18XER, okuyinto ibekwe phezu izimoto l Astra J, Chevrolet nesigubhu, Opel Zafira kuphawulwe.
Ukuthembeka yayisendaweni yesibili middle class uyokhulula uchungechunge izinjini Hyundai / Kia / Mitsubushi G4KD / 4B11, okuyizinto njalo abaholayo ikhwalithi kanye nokusebenza. sabo sokusebenza ivolumu 2.0 amalitha, kukhona uhlelo isikhathi isigaba izinguquko, elula ugesi uhlelo, inhlangano izinga okusezingeni eliphezulu. motors enjalo ifakwa kunoma iyiphi izimoto yamandla aphezulu ngokwanele futhi manufacturability: Hyundai i30, Kia Cerato, Mitsubishi ASX, Hyundai Sonata.
I junior ibhizinisi class uyakwazi ukuhlukanisa ezimbili-litre izinjini. Ngokwesibonelo, 2AR-FE nomthamo 165-180 amalitha. isekhondi., okuyinto ahlome Toyota Camry. Kuyinto onokwethenjelwa esisebenzayo amandla iyunithi. Njengoba elula, it is high. Ibe isilandelwa business class kukhona izinjini G4KE / 4B12 Hyundai / Kia / Mitsubishi. Izimoto kule ingxenye kukhona Ubukhulu ezahlukene kanye umthamo. Ngakho, injini kumele ihlangabezane nezidingo nokwethenjelwa tekusebenta futhi manufacturability.
ibhizinisi abasemakilasini aphezulu
I abaphezulu ibhizinisi ekilasini wethule sedans ehlonishwayo, isevisi engesiyo ezishibhile. Ngisho izinjini ziyinkimbinkimbi futhi amandla. Abaholi kule Lexus ekilasini: motors 2GR-FE futhi 2GR-FSE agqoke onobuhle yalesi brand kanye SUV premium. Ukusebenza kwe-motor, ngokuvumelana umbono yokuthi kunezigidi zabasebenzisi kanye ochwepheshe ngaphandle kobukhona izinkinga ezahlukene.
Ibe isilandelwa kuleli kilasi Volvo B6304T2 - Turbo, okuyinto operation eshibhile futhi kulula. Endaweni yesithathu Infiniti Q70 VQVQ37VHR. Ayimkhangi namandla, kanye nokusebenza enhle, futhi waba nokwethenjelwa, eye yathuthuka ngokomlando. Ngokuphathelene esiphezulu izimoto, lapho kuyodingeka wenze ngaphandle isilinganiso, njengoba ukusebenza kwabo kanye nokugcinwa kuza ngentengo. Ngakho, imishini enjalo futhi imishini ngesikhathi ibambene, kodwa kudinga imali sina utshalomali.
Ngakho, imoto cishe njalo brand noma isigaba kungenziwa ifakwe okuthembekile, kodwa ngenxa problemlos operation izinjini. Lapho uthenga imoto, qiniseka ukuthola konke ongakwazi ukukufunda injini yayo. Phela, UKUQINA yonke imoto incike izinga layo kanye nokwethembeka. Nokho, izinjini eziningi azisetshenziswa ukuhlomisa izimoto zanamuhla.
Inyama yenkomo roll ushizi kanye namakhambi - kumenyu samaholide
Igazi emcimbini wekati: ukwelashwa nokuvimbela
Anhlobonhlobo impahla - wax iphepha